MIG 21 Madness Package FS2004
Play 7 931
Umbhali: Kazunori Ito & Spike
Iphakheji kuhlanganisa imiphumela emisha like emva-izitofu, kuhlanganisa kwentuthuko ngokuhlelwa abaningi ukuze uthole Chile eduze real ngangokunokwenzeka.
I Mikoyan-Gurevich MIG-21 (Russian: Микоян и Гуревич МиГ-21; NATO igama nokubika: Fishbed) iyinhlangano leSupersonic jet fighter aircraft, yakhelwe ngu Mikoyan-Gurevich Design Bureau yonke eSoviet Union. Lase edume ngokuthi "balalaika", kusukela ndiza sika planform-umbono zifana Russian yomculo enezintambo zomculo noma ołówek (English: ipensela) by pilots Polish ngenxa ukuma fuselage yayo.
Izinguqulo Early abhekwa njengamagama lesibili isizukulwane jet fighters, kuyilapho izinguqulo kamuva abhekwa oyisizukulwane sesithathu jet fighters. Amanye amazwe 50 phezu amazwekazi ezine ziye zafinyelela MIG-21, futhi usaqhubeka ekhonza ezizweni eziningi eminyakeni engamashumi ayisihlanu ngemuva flight lwawo lokuqala. I fighter wenza Amarekhodi zezindiza. Okungenani ngegama, kuba khona kakhulu-kukhiqizwa leSupersonic ekuphonsweni e zezindiza emlandweni futhi kakhulu-kukhiqizwa combat izindiza kusukela Nempi YaseKorea, futhi kwadingeka ukukhiqizwa ebaleka olude indiza combat (1959 ukuba 1985 phezu kwakho konke ezahlukeneyo).